Kulamo siyaasadeed oo ka socda Nairobi | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Kulamo siyaasadeed oo ka socda Nairobi
Kulamo siyaasadeed oo ka socda Nairobi
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ka socday maalmihii ugu dambeeyay kulamo siyaasadeed oo looga soo horjeeday dowladda dhexe ee Soomaaliya , islamarkaana ay waddeen Madaxda maamul goboleedyadda iyo Siyaasiyiinta qaar.
Saacaddihii ugu dambeeyay Magaalada Nairobi waxaa ka dhacay kulamo u dhaxeeyay Siyaasiyiin horay xilal uga soo qabtay dowladdihii dalka soo maray, Madaxda maamul goboleedyadda iyo Beesha Caalamka.
Qaar ka mid ah Madaxda maamul goboleedyadda ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ku eedeeyay in ay kasoo horjeedda Nidaamka Federaalka oo beesha Caalamka ay ku bixisay dhaqaallo badan in uu dalka ka hirgalo.
Madaxda maamul goboleedyadda Galmudug, Puntland iyo Jubbaland ayaa Nairobi ku qabtay Kulamadii ugu ballaaran ee ay la qaataan xubnaha taageera Soomaaliya, waxaana qaarkood ay sheegeen in dhaqaallaha loogu tala galay Soomaaliya uusan soo gaarin bilooyinkii ugu dambeeyay.
Caddaadis ballaaran ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ay kala kulmeysa kulmado ka socdo Nairobi xilli horay Siyaasiyiin ku shiray Nairobi ay u sheegeen in dowladda Soomaaliya ee hadda jirtaa ay ku fashilantay Sugitaanka Amniga dalka.
Previous articleMadaxwayne Farmaajo oo u ambabaxay dalka Masar
Next articleShir looga hadlayo dhaqaalaha Soomaaliya oo ka socda Addis Ababa